Namtichi weellisaa Daadhii Galaan ajjeese hidhaa umurii guutuun adabame - BBC News Afaan Oromoo
Namtichi weellisaa Daadhii Galaan ajjeese hidhaa umurii guutuun adabame
Image copyright Tufaa Wadaajoo
Himatamaa Katamaa Raggaasaa kan Artiist Daadhii Galaan ajjeesuun himatame hidhaa cimaa umurii guutuutiin adabe.
Manni Murtii Olaanaa Godina Shawaa Bahaa dhadhacha yakkaa caamsaa 28, bara 2011 A.L.I ooleen dhimma ajjechaa Daadhii Galaan irratti murtii kenneera.
Himatamaan kun nama ajjeesuuf itti yaadee qophaa'udhaan halkan keessaa saatii 5:30'tti wellisaa Daadhii Galaan aanaa Liiban Cuqqaalaatti meeshaa waraanaa shugguxiidhaan rasaasa lama dhukaasuun lapheerra rukutee ajjeesuun himatame.
Himatamaan kun gocha ajjeechaa kana 'hin raawwanne' jechuun waakkateera.
Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan eenyu ture?
Ragaan mana yaalaa irraa dhihaate miidhamaan artisti Daadhii Galaan meeshaa waraanaatiin du'uu kan eeru yoo ta'u rasaasni tokko reeffa miidhamaa keessatti argamuu ibsa.
Ragaa 'forensic' irratti qulqullaa'een rasaasni reeffa keessaa argame kan shugguxii himatamaan kun heeyyama itti qabu irraa kan dhukaafame ta'uu mirkanaa'eera jedhe manni murtichaa.
Ragaaleen ittisaa himatamaan dhiheeffates himaticha irraa ittisuu hin dandeenye.
Weellisaa Daadhii Galaan Aanaa Liiban Cuqqaalaa bakka Ashuffee jedhamutti ture eebba hoteelaa irratti Guraandhala 02 2019 kan ajjeefame.
Yeroos rasaasa gammachuuf dhukaafameen akka ajjeefame gabaafamee ture.
Haa ta'u malee himatni himatamaa Obbo Katamaa Raggaasaa irratti dhiyaate himatamaan kun itti yaadee gadi qabee dhukaasuun akka ajjeese hima.
Goodayyaa suuraa Himatamaa Katamaa Raggaasaa mana murtii keessatti
Abbaan alangaa yaada adabbii cimsu dabalataa akka hin qabneefi manni murtii murtee akka kennu gaafateera.
Abukaatoon himatamaa himatamaan kuni galmee yakkaa kana dura akka hin qabnee fi nama barumsa hin qabneefi itti fayyadama meeshaa irratti hubannoo hin qabne ta'uu xiyyeefannaa keessa galchuun murtii akka salphisuuf gaafataniiru.
Himatamaa Katamaa Raggaasaas amma dura himatamees adabamees hin beeku, maatii 9 akka bulchuu fi maatii dadhaboon bulcha waan ta'eef adabbii naaf haa xiqqaatu jechuun gaafataniiru.
Abbaan seeraa mana murtii Olaanaa godina shawaa Bahaas falmii gama lamaanii dhihaate ilaaluun himatamaa Katamaa Raggaasaa ajjeechaa artiist Daadhii Galaan irratti raawwateef hidhaa cimaa umurii guutuutiin akka adabamu murteessee jira.
Maatiin weellisaa Daadhii Galaan murtee darbe kanarraa gammachuu akka hin qabne BBC'tti himaniiru.
"Namoonni Daadhii achitti waamanii akka ajjeefamu taasisaniifi kanneen biroo ajjeechaa kana keessaa harka qaban nagaan mana isaanii taa'aa jiru" jechuun obboleettiin isaa Birtukaan Galaan imimmaaniin BBC'tti dubbatteetti.
"Takkaa matii isaaf jedhee hin jiraanne, uummata Oromoof jedhee osoo olii gadi kaatu ajjeefame, [ajjeechaan isaa] sirriitti qoratamee ifa ta'uu qaba ture" yaada jedhus qabdi.
Obboleessi isaa maandhaa Guchii Galaan ammoo murtiin hidhaa umurii guutuu ni xiqqaata, du'aan adabamuu qaba ture jedha.
Ajjeechaan Daadhii Galaan warra artistichaaf waamicha taasisan dabalatee namoota hedduun ta'e jedhamee kan qindaa'edha komii jedhu kan qabu hiriyaan isaa Sisaay Bulbulaa murteen kun nama tokko qofarratti darbuu hin qabu ture jedha.
Abbaan Daadhii Obbo Galaan Wadaajoos murtichi xiqqaachuu fi namichi Daadhii 'manatti waamee ajjeesise' jedhan adabamuu dhabuu komataniiru.
Abbaan seeraa mana murtii Godina Shawaa Bahaa obbo Kaamiloo Yusuuf himatni mana murtiitti dhiyaate kan himatamaa tokkoo qofa, manni murtiis sanumarratti ragaa kenne jedhu.
Maatiin namoonni biroo ajjeechaa kana keessaa harka qaban jiru komii jedhu kan qaban yoo taate, sana waajjira poolisiitti himachuu qabu jechuun komii warraaf deebii kennu.
Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan attamiin yadatama?